.အမိုက်စားဆိုင်ကယ်ကြီးနဲ့ MTV ရိုက်ချင်တဲ့နန်းဆုအတွက် အဝေးကြီးကနေ ဆိုင်ကယ်မောင်းပြီး ရိုက်ကွင်းထိတကူးတကလာပို့ပေးခဲ့တဲ့ ဆုပန်ထွာတို့ဇနီးမောင်နှံ. – Thukhuma
.အမိုက်စားဆိုင်ကယ်ကြီးနဲ့ MTV ရိုက်ချင်တဲ့နန်းဆုအတွက် အဝေးကြီးကနေ ဆိုင်ကယ်မောင်းပြီး ရိုက်ကွင်းထိတကူးတကလာပို့ပေးခဲ့တဲ့ ဆုပန်ထွာတို့ဇနီးမောင်နှံ.
အနုပညာမောင်နှမတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန်လိုအပ်တာကူညီပြီး အနုပညာလောကကြီးကို အလှဆင်နေ ကြသူတွေပါ။ ဒီနေ့မှာလည်း နန်းဆုရဲ့ ” မင်းအနားမှာ ” MTV ရိုက်ကူးဖို့အတွက် ဆိုင်ကယ်နဲ့ရိုက်ချင်တဲ့ နန်းဆုရဲ့ဆန္ဒကို ဆုပန်ထွာတို့ ဇနီးမောင်နှံက ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်တွေကိုသဘောကျပြီး စုဆောင်းတတ်တဲ့ ကိုဥက္ကာကြောင့် နန်းဆုရဲ့ MTV ဟာ အမိုက်စားဆိုင်ကယ်ကြီးနဲ့ လန်းလွန်းနေခဲ့ပါတယ်။
သူမရဲ့ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်ကပုံရိပ်တွေကိုဝေမျှတဲ့အချိန်မှာလည်း ဒီဆိုင်ကယ်ကြီးနဲ့ ဓာတ်ဖမ်းခဲ့ပြီး MTV တစ်ခုလုံးနီးပါး ဒီဆိုင်ကယ်ကြီးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဟာလည်း ရင်ခုန်ချင်စရာကောင်းလောက်အောင် မိုက်လွန်းနေတာပါ။ သီချင်းအသစ်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကိုဖမ်းစားခဲ့သလို အမိုက်စား MTV နဲ့လည်း အားလုံးရဲ့အာရုံကို ထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြန်ပါပြီ။
ကူညီပေးခဲ့တဲ့ မပန်တို့ဇနီးမောင်နှံကို ” မမပန်ရေ နန်းဆုက ဆိုင်ကယ်နဲ့ ရိုက်ချင်တာလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ဟိုးအဝေးကြီးကနေ shooting ထိ မောင်းလာပေးပြီး တကူးတကဝင်ကူပေးလို့ ကိုဥက္ကာရော မမပန်ရော ကျေးဇူးပါ love u ” ဆိုပြီး နန်းဆုက ကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ပါ တယ်။ လူကလည်းမိုက် ဆိုင်ကယ်ကလည်းမိုက်ဆိုတော့ တကယ့်ကိုအလန်းစား MTV ဖြစ်မှာ အသေအချာပါပဲ။
အႏုပညာေမာင္ႏွမေတြဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္လိုအပ္တာကူညီၿပီး အႏုပညာေလာကႀကီးကို အလွဆင္ေန ၾကသူေတြပါ။ ဒီေန႔မွာလည္း နန္းဆုရဲ႕ ” မင္းအနားမွာ ” MTV ႐ိုက္ကူးဖို႔အတြက္ ဆိုင္ကယ္နဲ႔႐ိုက္ခ်င္တဲ့ နန္းဆုရဲ႕ဆႏၵကို ဆုပန္ထြာတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံက ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆိုင္ကယ္ေတြကိုသေဘာက်ၿပီး စုေဆာင္းတတ္တဲ့ ကိုဥကၠာေၾကာင့္ နန္းဆုရဲ႕ MTV ဟာ အမိုက္စားဆိုင္ကယ္ႀကီးနဲ႔ လန္းလြန္းေနခဲ့ပါတယ္။
သူမရဲ႕႐ိုက္ကြင္းေနာက္ကြယ္ကပုံရိပ္ေတြကိုေဝမွ်တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ဒီဆိုင္ကယ္ႀကီးနဲ႔ ဓာတ္ဖမ္းခဲ့ၿပီး MTV တစ္ခုလုံးနီးပါး ဒီဆိုင္ကယ္ႀကီးပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ဟာလည္း ရင္ခုန္ခ်င္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ မိုက္လြန္းေနတာပါ။ သီခ်င္းအသစ္ေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြကိုဖမ္းစားခဲ့သလို အမိုက္စား MTV နဲ႔လည္း အားလုံးရဲ႕အာ႐ုံကို ထပ္မံသိမ္းပိုက္လိုက္ျပန္ပါၿပီ။
ကူညီေပးခဲ့တဲ့ မပန္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံကို ” မမပန္ေရ နန္းဆုက ဆိုင္ကယ္နဲ႔ ႐ိုက္ခ်င္တာလို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ ဟိုးအေဝးႀကီးကေန shooting ထိ ေမာင္းလာေပးၿပီး တကူးတကဝင္ကူေပးလို႔ ကိုဥကၠာေရာ မမပန္ေရာ ေက်းဇူးပါ love u ” ဆိုၿပီး နန္းဆုက ေက်းဇူးတင္စကားေျပာခဲ့ပါ တယ္။ လူကလည္းမိုက္ ဆိုင္ကယ္ကလည္းမိုက္ဆိုေတာ့ တကယ့္ကိုအလန္းစား MTV ျဖစ္မွာ အေသအခ်ာပါပဲ။